ဒုတိယအကြိမ်မြောက် ချုပ်ရီမန်ကို မေလ ၇ ရက်နေ့ နေ့လယ်ပိုင်းအချိန်က ငါန်းဇွန်မြို့နယ်တရားရုံးတွင် ထပ်မံယူစဉ် / ဇော်ဇော်
By ဒီလှိုင်းဝင်း7May 2019
မန္တလေးတိုင်း ဒေသကြီ၊ မြင်းခြံ ခရိုင် ငါန်းဇွန် မြို့နယ်၊ မြို့သာ စက်မှု ဥယျာဉ် မြို့တော် အတွင်းရှိ ဆေးခြောက် စိုက်ခင်းမှ ဖမ်းဆီးခံရသူများကို ဆက်လက် ချုပ်ထားကြောင်း ငါန်းဇွန်မြို့နယ် တရားရုံးက သိရသည်။
ငါန်းဇွန် မြို့နယ် တရားသူကြီး ဦးဇော်မင်းဦးက “ရဲလုပ်ထုံး လုပ်ငန်းစဉ်တွေ အရ အမှု ဆက်လက် စစ်ဆေးဖို့ ကျန်ရှိနေတာကြောင့် ထပ်မံ ချုပ်ထားဖို့ တောင်းခံလာတဲ့ အတွက် ခွင့်ပြုပေးခဲ့ပါတယ်” ဟု ပြောသည်။
မြို့သာ စက်မှု ဥယျာဉ် မြို့တော် အတွင်းရှိ ဆေးခြောက် စိုက်ခင်းနှင့် ဆက်စပ် ပစ္စည်းများကို ဖမ်းဆီး အရေးယူပြီးနောက် ဧပြီ ၂၄ ရက်က ပထမအကြိမ် ချုပ် ရမန် ယူခဲ့သည်။
ဒုတိယ အကြိမ် ချုပ် ရမန်ကို ငါန်းဇွန် မြို့နယ် တရားရုံးက မေလ၂၁ ရက် အထိ ခွင့်ပြုပေးခဲ့ပြီး အဆိုပါ အမှုအား မြင်းခြံ ခရိုင် တရားရုံး၌ ဆက်လက် စစ်ဆေးသွားမည် ဟု သိရသည်။
စိုက်ခင်း စိုက်ပျိုးသည့် 3M ကုမ္ပဏီ၏ ဥပဒေ အကြံပေး တရားလွှတ်တော် ရှေ့နေ တော်ဝင် ဦးခင်မောင်သန်းက “အခု စိုက်ခင်းက ဆေးမျိုးနွယ်ဝင် အပင်တွေ ဖြစ်တယ် ဆိုပြီး သူတို့ကို ဖမ်ဆီးထားတာပေါ့နော်။ သူတို့က တိုင်းအစိုးရ အဖွဲ့နဲ့ စီမံကိန်း ဥက္ကဋ္ဌ တို့ရဲ့ တရားဝင် ခွင့်ပြုချက်နဲ့ လုပ်ဆောင်နေကြတာ ဖြစ်တယ်။ ဒါကို ဆေးခြောက် စိုက်ခင်းမို့ အရေးယူမယ် ဆိုရင် စိုက်ပျိုးထားတာတွေမှာ မူးယစ်ဆေးဝါး ဘယ်လောက် အထိ ပါသလဲ ဆိုတာကို စမ်းသပ်ပြီး ချပြပေး သင့်တယ်” ဟု ပြောသည်။
အဆိုပါ စိုက်ခင်းနှင့် ပတ်သက်၍ စိုက်ပျိုးသူ အမေရိကန် နိုင်ငံသားများ ဖြစ်ကြသော Mr. John Fredric Todoroki (၆၃) နှစ်၊ Mr. Alexander Skemp Todoroki (၄၉) နှစ်(စုံစမ်းဆဲ)၊ စိုက်ခင်း တာဝန်ခံ ရှိန်းလတ် (၃၇)နှစ်၊ မရွှန်းလဲ့မြတ်နိုး (၂၃)နှစ် တို့ကို ဧပြီ ၂၃ ရက်က မူးယစ် ဆေးဝါးနှင့် စိတ်ကို ပြောင်းလဲစေသော ဆေးဝါးများ ဆိုင်ရာ ဥပဒေ ၁၉-က၊၂၀-က၊၂၁ များ အရ အရေးယူခဲ့ကြောင်း မူးယစ်ဆေး သုံးစွဲမှု ထိန်းချုပ်ရေး ဗဟို ကော်မတီ (CCDAC Myanmar) က သတင်း ထုတ်ပြန်ထားသည်။
ထိုသို့ ဖမ်ဆီးပြီးနောက် စိုက်ခင်းအား ငါန်းဇွန်မြို့နယ် ရဲတပ်ဖွဲ့မှ လုံခြုံရေး ချထား၍ ထိန်းသိမ်းထားရှိကြောင်း သိရသည်။
အဆိုပါ စိုက်ခင်း ပြုလုပ်ရန် အတွက် ၂၀၁၈ ခုနှစ် မေလခန့်က စိုက်ခင်း ဧက ၆၀ ခန့်အား အမေရိကန် နိုင်ငံသား John Fredric ၊ Thomas နှင့် Alexandra Skemp တို့ ၃ ဦးက သဘာဝ ဆေးဘက်ဝင် လျှော်ပင် စိုက်ပျိုးရန် Mandalay Myotha Industrial Development Public Co,Ltd (MMID) ထံမှ ငှားရမ်း လုပ်ကိုင်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။
လူမှုကွန်ရက် စာမျက်နှာတွင် ဆေးခြောက် စိုက်ခင်းဟု နာမည် ကြီးနေသည့် မြို့သာ စက်မှုဇုန် အတွင်း စိုက်ပျိုးထားသည့် စိုက်ခင်း ဧက ၃၀ ကျော်သည် ၁ နှစ်နီးပါး ရှိပြီး ကင်ဆာ ရောဂါ ပျောက်ဆေး ထုတ်လုပ်ရန် ရည်ရွည်၍ စိုက်ပျိုးခြင်း ဖြစ် ကြောင်း သတင်းများ ထွက်ပေါ်ခဲ့ပြီးနောက် ဧပြီ ၂၂ ရက်က မန္တလေးတိုင်း ရဲတပ်ဖွဲ့၊ အစားအသောက် နှင့် ဆေးဝါး ကွပ် ကဲမှု ဦးစီးဌာန(FDA) ၊မြင်းခြံခရိုင် အုပ်ချုပ်ရေးမှူးနှင့် ဓာတုဗေဒ စစ်ဆေးရေး ဌာနခွဲ (မန္တလေး) တို့က သွားရောက် စစ် ဆေးခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။
စိုက်ခင်း ဧက ၂၀ တွင် ဆေးခြောက် အပင်ပေါင်း ၃၄၉,၂၉၀ ခန့်၊ ပျိုးပင် ၅၂၀ဝ ခန့် ရှိပြီး ဆာလာအိတ် ၁၉ အိတ် အတွင်း မှ ဆေးခြောက်အစေ့ (မျိုးစေ့) ၃၈၀ ကီလို၊ ဖန်ပုလင်း အတွင်းမှ ဆေးခြောက်အဆီ ၁,၈၀၄ ဂရမ်၊ Formic Acid ၁ လီတာ၊ အက်သနော အရည် ၄၅. ၆ လီတာ၊ အယ်လ်ကိုဟော အရည် ၂၂. ၈ လီတာ၊ Bio Maxs အစိမ်းရောင် အရည် ၆ လီတာ၊ Acetone အရည် ၅ လီတာ၊ Acetonitrile အရည် ၅ လီတာ၊ Concort Water ၃ လီတာ၊ Methonal အရည် ၁၂.၅ လီတာ၊ အမိုနီယမ်ဖော့စဖိတ် ၅၀ဝ ဂရမ်ပါ မော်တော်ယာဉ် ၂ စီး၊ ဆေးခြောက် ၂၇၀.၅ ကီလိုနှင့် ဆက်စပ်ပစ္စည်းများကို သိမ်း ဆည်း ရမိခဲ့ကြောင်းလည်း ထုတ်ပြန်ချက်တွင် ပါရှိသည်။
မြို့သာ ဒေသခံ တဦးက “တခြား နိုင်ငံတွေမှာတော့ ခွင့်ပြုတာရှိတယ်။ ကျနော်တို့ နိုင်ငံက law နဲ့ မတူလို့ ဖြစ်မှာပေါ့။ စိုက် ထားတာက လမ်းဘေးမှာ မြင်သာထင်သာ ရှိတယ်။ ခိုးကြောင်ခိုးဝှက် လုပ်နေတာမျိုး မဟုတ်ဘူး။ အလုပ်သမား ၈၀၊ ၉၀ နဲ့ စိုက်နေကြတာ။ အခု ဖြစ်တယ် ဆိုတာက ကျနော်တို့ဆီက ဥပဒေနဲ့ မညီလို့သာ ဖြစ်သွားတာ။ သူတို့က ဥပဒေမဲ့ လုပ်နေ တာ မဟုတ်ဘူး လို့တော့ မြင်တယ်။ ဥပဒေနဲ့ မညီရင် အစကတည်းက ခွင့်မပြုခဲ့သင့်ဘူး” ဟု ပြောသည်။
ထို့အပြင် ချဉ်ပေါင် လျှော်နွယ်ဝင် ဆေးခြောက် အာနိသင် ပါရှိသည်ဟု ယူဆရသော အရွက်ခြောက် မှုန့် ၅ ကီလိုခန့်နှင့် အရက် (ဘီအီး) ၅ ဂါလံတို့ ရောစပ်၍ အဝတ်လျှော်စက်ထဲ ထည့်မွှေပြီး ပေါင်းခံပါက တဆေး ပုံသဏ္ဌာန် အစေး ၂၅၀ ဂရမ်ခန့် ရရှိကြောင်း၊ အစေ့အား ကြိတ်၍ ရရှိသော အဆီကို ပေါင်းခံ၍လည်း ထုတ်လုပ်နိုင်ကြောင်း၊ ကင်ဆာ ပျောက်ဆေး ထုတ်လုပ်ရန် ရည်ရွယ်၍ စိုက်ပျိုးခြင်း ဖြစ်နိုင်ကြောင်း စစ်ဆေးတွေ့ရှိရကြောင်း ပြည်ထဲရေး ဝန်ကြီးဌာန၏ ထုတ်ပြန်ချက် တွင် ပါရှိသည်။
မြန်မာနိုင်ငံသည် ဆေးခြောက် စိုက်ပျိုးခွင့်ကို တရား ဥပဒေအရ ခွင့်ပြုထားခြင်း မရှိကြောင်း၊ ဆေးခြောက်မှာ မူးယစ် ဆေးဝါး အမျိုးအစားတွင် ပါဝင်နေသဖြင့် မြို့သာ စက်မှု ဥယျာဉ် မြို့တော် အတွင်းရှိ ဆေးခြောက် စိုက်ခင်းအား မကြာခင် ဖျက်သိမ်းသွားမည်ဟု မန္တလေးတိုင်း ဒေသကြီး အစိုးရ အဖွဲ့ ဝန်ကြီးချုပ် ဒေါက်တာဇော်မြင့်မောင်က မေလ ၃ ရက်က မီဒီယာများကို ဖြေကြားထားသည်။
ယနေ့ ရုံးချိန်းသို့ ဒေသခံ စိုက်ခင်း အလုပ်သမား ၅၀ ကျော် လာရောက် ဝန်းရံခဲ့ကြသည်။
Topics: ငါန်းဇွန် ဆေးခြောက်စိုက်ခင်း